Ikhaya - uMncedisi weVisa
Molo, Singakunceda ngantoni?
QAPHELA: Izindlu zoonozakuzaku baseMelika ziyavula kwakhona. UVisa Helper uyaqhubeka nokubeka iliso kubhubhane we-COVID-19 kulo naluphi na uhlaziyo malunga nokufudukela kwelinye ilizwe kunye nokuhamba.
Funda indlela yokufumana i-visa yase-US ngokukhawuleza nangokulula.
Joyina iNethiwekhi yoMncedisi weVisa
Fumana i-visa yase-US, ngaphandle kwengxaki.
Izixhobo zeqonga lethu elinamandla, imibuzo kunye nezikhokelo ekulula ukuziqonda zikuxhasa nge-visa yakho yase-US kunye nohambo lokufudukela kwelinye ilizwe, onke amanyathelo endlela.
Funda ngendlela yokufuduka kunye nokuhamba noMncedisi weVisa!
I-Visa yeKharityhulam yeGreen Card
IVisa yomtyali mali
IiVisa zokuTshintsha kweNkcubeko
Iqonga lokuqala le-visa-nye lokuqala emhlabeni.
Ukwamkelwa njenge-visa yase-US ayisiyonto ilula.
Kukho amanyathelo amaninzi anzima ukuhamba, i-maze engapheliyo yezixhobo ze-intanethi, kwaye ukuziqonda ngokwakho kunokuba nzima.
Kungenxa yoko le nto senze uMncedisi weVisa; i-visa yakho yokuma kwi-intanethi kunye neziko lezixhobo zokufudukela kwelinye ilizwe.
Nokuba sele uza kufaka isicelo se-visa yase-US okanye sele ufake isicelo kwaye ubambekile ndawo apha endleleni-izikhokelo zeqonga lethu, imibuzo kunye nezixhobo ezikukhokelela kumanyathelo okufumana i-visa yakho yamkelwe, ngokukhawuleza.
Iqonga lethu linika i-visa yase-US kunye nolwazi lokungena kwelinye ilizwe olwenzelwe amazwe athile.
Khetha ilizwe lakho ngezantsi, ukubona ukuba sinazo na izikhokelo, izixhobo kunye nolwazi kubuzwe bakho!
Uvela kweliphi ilizwe Alibhaniya Aljeriya Angola Argentina Armeniya Azerbayijani Bhareyini Bhangladeshi Bhelarusi Benin Bhutan Bholiviya Bhozniya neHerzegovina Botswana Brazil Burkina Faso Bruneyi Bhulgariya Kheyip Verde Khambodiya Khameruni Tshad iTshayina Kholambiya Khot divwa icosta Rica Khroweyishiya Tyhubha ilizwe lasedominic Ekhuwado Egypt El Salvado Eritrea Yuthophiya Gabon Gambiya Georgia Ghana Guatemale Guinea Honduras Hong Kong Indiya Indoneshiya Iran Irakh Sirayeli Jameyikha Jordan Kazakhstan Khenya Khuweyithi Khirgizstan iLaos Libhanon Libhiya Masedoniya Malawi Maleyishiya mali Morishiyasi Mekhsikho iMoldavia Monakho Mongoliya Montenegro Morokho Mozambikh Namibhiya Nephal Nikharaguwa Nayija Nayijeriya Oman Phakistan Palestina Panama Paraguay Peru Filipayinzi Khwatha Romaniya Rhashiya Rwanda ISaudi Arabia Senegal serbia Sierra Leone Singapho Somaliya Mzantsi Afrika esri Lanka Sudan Tajikistan Thanzaniya Thayilendi Togo Thunishiya ikarikuni Turkmenistani Uganda Yukreyini IUnited Arab Emirates Uruguay Uzbhekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambiya Zimbabwe i-USA
Ukhenketho lweVisa olukwi-Intanethi-
Funda ngendlela yokufaka isicelo se-visa yase-US engaphantsi kwemizuzu engama-30.
Awuyi kuchitha iiyure ukuntywila kulwazi ukuphendula imibuzo enxulumene ne-visa.
Isixhobo sethu esikwi-Intanethi seVisa sisebenzisa imibuzo elula eneempendulo ezininzi ethi icuthe ngokukhawuleza apho ukhoyo kwi-visa yakho okanye kuhambo lokufuduka.
Ngokusekwe kwiimpendulo zakho, uMncedisi weVisa emva koko uzisa izikhokelo ezithile kunye nolwazi olulungiselelwe wena ekufuneka ulilandele ukuze uhambise isicelo sakho sevisa.
Ukuqonda ngokulula izikhokelo-
Cwangcisa amanyathelo akho alandelayo, ngemizuzu.
Izikhokelo zethu ziqhekeza i-visa enzima kunye nezihloko ezingena kwamanye amazwe zibe ngamanyathelo alula, aqondakala lula.
Isikhokelo ngasinye siqulathe ulwazi oluhlaziyiweyo oluhambelana kuphela neemeko zakho kunye nelizwe lokuzalwa.
Kwimizuzu nje embalwa, unokufunda isikhokelo sethu, uqonde amanyathelo akho alandelayo, emva koko uthathe inyathelo kwangoko.
-Uvavanyo lokuLungela uVisa-
Qikelela amathuba akho okufumana i-visa, ngaphambi kokuba ufake isicelo.
Uvavanyo lwethu lokuLungela iVisa sisixhobo esiqhutywa ziinkcukacha-manani esinokuqikelela amathuba okufumana ngempumelelo i-visa yase-US.
Izixhobo zezixhobo zolwazi lwakho kunye nobudlelwane obukhoyo phakathi kwelizwe lakho kunye ne-United States.
Kuxhomekeke kumanqaku akho, unokuthatha isigqibo sokubeka emngciphekweni ixesha lakho, imali kunye nomzamo wokufaka isicelo sevisa.
Ukuba semngciphekweni, zenzelwe izicelo zevisa.
Ukutyikitya kwiqonga lethu kuya kukunika ukufikelela okhethekileyo kwi-visa yobuchwephesha kunye namagqwetha okufudukela kwelinye ilizwe, kunye neengcali ezithembakeleyo zokuqhubekeka kwevisa ukuze wenze isicelo sakho sevisa.
Ukuqinisekiswa kwegama ngalinye kunye negama labo kuhlolwe ngononophelo ukuqinisekisa ukuba unxibelelana neqabane elifanelekileyo ukukunceda kwimeko yakho yevisa.
Ukufumana ukufikelela ngokupheleleyo kwiqonga lethu ngokubhalisa ngentlawulo encinci kube kanye.
2. Iphepha lemibuzo leVisa
Phendula imibuzo elula yokukhetha izinto ezininzi ukunceda iqonga lethu linciphise kanye apho ukuyo kwi-visa yakho okanye kuhambo lokufuduka.
3. Thatha amanyathelo
Fumana izikhokelo ezifanelekileyo, ezenzelwe wena, qikelela amathuba akho okufumana i-visa ngoVavanyo lokuLungela iVisa kwaye usebenzisane nobambiswano oluqinisekisiweyo lweqela lesithathu.
Vula ngokupheleleyo ubomi bonke ukufikelela kuMncedisi weVisa ngokutyala imali encinci, kube kanye nge- $ 25 USD.
Ukufikelela kwiQonga leNcedisi leVisa
Ukufikelela kumagqwetha okufuduka kunye neeprosesa zokundwendwela
Isixhobo soVavanyo lokuFaneleka koVavanyo
Izikhokelo zeVisa ezihlaziyiweyo
Izixhobo ze-Intanethi kunye neeBlogs
Inkxaso yoMthengi ezinikezelweyo
Khusela kwiimpazamo zesicelo esineendleko
Impazamo kwisicelo sakho se-visa sinokulibazisa ukuvunywa iinyanga- okanye iminyaka.
Xa ubhalisela iVisa Helper, ayizukugcina kuphela ixesha lokuba ungaphandi ngayo yonke into ngokwakho, uya kuba nesandla esikuncedayo ekukhuseleni ekwenzeni iimpazamo zesicelo esinexabiso eliphezulu.
Ndakwazi ukwazi ngqo ukuba mandenze ntoni ukuze umyeni wam asuke eSaudi Arabia ngenxa yeVisa yokutshata. Sebenzisa eli qonga kulula kakhulu! Kuthathe imizuzu engaphantsi kwe-10 kwaye bendikwazi ukufaka isicelo. Andifuni ukubulela uMncedisi weVisa ngokwaneleyo!
Umzi wommeli wase-Russia e-Russia kwakunzima ukujongana nawo, sasingazi ukuba senze ntoni ukuze i-Visa yethu yeFiance ityhale. Ngoku siyazi yonke into malunga namanyathelo ethu alandelayo ngenxa yoMncedisi weVisa! Benza yonke into ilula ukuyazi. Umfazi wam wayifumana i-visa yakhe kwaye uhlala nam eMelika.
UVisa uMncedisi unditshintshe ngokupheleleyo nobomi benkosikazi yam. Ndikwazile ukuqonda ukuba loluphi uhlobo lwe-visa endilifunayo, inkqubo, kunye nalo lonke inyathelo ebesilifuna ukuqinisekisa ukuba sifumana i-Visa yethu yokutshata. Ndicebisa nabani na osokolayo kwimeko yakhe yokufuduka ukuba asebenzise iVisa Helper.
Ndamkelwa kwiphupha lam iYunivesithi eVirginia! Andinalo ixesha okanye ulwazi lokufaka isicelo sam kodwa uMncedisi weVisa wayenza yalula kakhulu. Kwisithuba esingaphantsi kosuku olunye ndakwazi ukufaka isicelo seVisa yabafundi.
IVisa Helper sisizathu sokuba umntakwethu omncinci eze eUnited States emva kweminyaka elindile. Bendingazi nto kwaye ndingazi ukuba ndingayisebenzisa njani le nkqubo, ngokusebenzisa iVisa Helper ndikwazile ukunxibelelana negqwetha ukusinceda kwityala lethu. Uthando oluninzi kuMncedisi weVisa!
Unkosikazi wam oneminyaka esixhenxe ubudala wafika e-USA emva kokuchitha iinyanga esenza uphando ngendlela yokwenza isicelo seVisa yoMtshato. Ndiyabulela uthixo ndifumene uMncedisi weVisa. Izikhokelo zabo zeVisa kulula ukuziqonda kwaye zilandele. Ndinetyala kuyo yonke into kwaba bantu, enkosi.
Bhalisa ukuze ufumane (ngeveki) Ukuhlaziywa kweendaba ezithunyelwe ngqo kwi-inbox.
Imfihlo yakho yeyona nto iphambili kuthi. Lonke ulwazi lokuposa lugcinwa luyimfihlo ngokungqongqo. Ungarhoxa nanini na. Ukufunda ngakumbi malunga nendlela esiqokelela ngayo, siyigcina, kwaye siyicwangcise ulwazi lwakho lwabucala ngokuthobela i-GDPR, nceda ujonge eyethu umthetho wabucala.
IINKONZO, IZINTO NEZIPHONONO EZINIKEZELWA NGETHU AZIZO IINGCEBISO NGOKUSEMTHETHWENI NEENKCUKACHA ZOLWAZI KUPHELA. KUFUNEKA UQHAGAMSHELANE IGQWETHA LAKHO UKUZE UFUMANE IINGCEBISO NGOKUHLONIPHA NAYIPHI INGXAKI ENGQOQO OKANYE INGXAKI. UKUSETYENZISWA KUNYE NOKUFUMANEKA KWIWEBHSAYITHI AKUYI UKWENZA NAYIPHI INGXELO YOMTHENGI, OKANYE UBUDLELWANE OLUFANAYO.
123 IKing Rd. Isitalato iWest, isiXeko 1234
Ilungelo lokushicilela © 2020 Visa Helper - Onke amalungelo agciniwe
Iinkonzo, izixhobo, kunye nohlalutyo olunikezwe yi-US ayizizo iingcebiso zomthetho kunye neenkcukacha zolwazi kuphela kwaye akufuneki kuthenjelwe kuzo njengengcebiso yezomthetho okanye ekuphela komthombo wakho wolwazi. Kuya kufuneka unxibelelane negqwetha lakho ukufumana ingcebiso ngokubhekisele kuwo nawuphi na umcimbi okanye ingxaki. Ukusetyenziswa kunye nokufikelela kwiwebhusayithi akwenzi nabuphi na ubudlelwane begqwetha nomxhasi. Izimvo kunye nohlalutyo olubonakaliswe kwiwebhusayithi alufezekanga kwaye lusetyenziselwa ulwazi kuphela. Nangona uhlalutyo lwedatha ebonelelwe kwiwebhusayithi luvelisiwe kwaye lwenziwa kwimithombo ekukholeleka ukuba inokuthenjwa, asenzi nanye kwaye akufuneki uthembele kuyo nayiphi na iwaranti, echaziweyo okanye echaziweyo, eyenziweyo malunga nokuchaneka, ukwanela, ukuphelela, ukuba semthethweni, ukuthembeka, okanye ukuba luncedo kwalo naluphi na ulwazi oluqulethwe apha. Naphantsi kwayiphi na imeko asiyi kuba noxanduva kuwe nangaluphi na uhlobo ngenxa yokusetyenziswa kwesiza okanye ukuxhomekeka kulo naluphi na ulwazi olunikezwe kule ndawo. Ukusetyenziswa kwakho kwesiza kunye nokuxhomekeka kwakho kulo naluphi na ulwazi olukule sayithi kusemngciphekweni wakho.
Enkosi ngokujoyina iVisa Helper! Le webhsayithi yenzelwe ukususa ukudideka malunga neevisa kunye nokuhamba ngokubonisa ulwazi olufunayo. Phendula imibuzo efanelekileyo yeyiphi i-visa ongafuna uncedo ngayo okanye ofuna ukufaka isicelo sayo. Khumbula ukuyiphendula le mibuzo ngokwembono yomenzi-sicelo (Lowo wenza isicelo sephepha-mvume lokundwendwela.) Ukuba sele use-United States kwaye usebenzisa iinkonzo zethu egameni lomntu omfaka isicelo, khetha ukhetho olufanelekileyo njengoko beza phezulu. Ukuba ufuna uncedo, khetha iqhosha lenkxaso kwaye usithumele umbuzo wakho.
Awukasenzi isicelo sale visa okwangoku, akukho ngxaki! Kuqala, siza kukuthatha uVavanyo lokuLungela iVisa. Le mibuzo yenzelwe ukukubonisa amathuba okufumana le visa ngokuphendula imibuzo embalwa malunga nomenzi-sicelo (Lowo wenza isicelo sevisa). Icwangciswe ngokusebenzisa idatha yexesha lokwenyani lobudlelwane bezopolitiko, ezoqoqosho kunye nezokhuseleko phakathi kwelizwe lomenzi-sicelo kunye nelizwe ekujoliswe kulo. Olu vavanyo alwenzelwanga ukuba luchaneke ngokupheleleyo; Injongo yaso kukukunika ingqikelelo yokufumana i-visa. Nceda uqaphele, uVavanyo loVavanyo loVavanyo LWEENKCUKACHA ZOLWAZI KUPHELA, nangayiphi na indlela akufuneki usebenzise iziphumo njengezinto zokugqibela zokufaka isicelo njengoko ityala ngalinye le-visa liphathwa ngokwahlukeneyo kwindlu yozakuzo ngokubhekisele kwimfaneleko yayo.
Apha uya kufumana uluhlu lwamagqwetha aqinisekisiweyo, anelayisensi yokufuduka anokukunceda ngokufaka isicelo sevisa okanye ukukunceda kwisicelo sakho sangoku. Khetha amacebo okucoca ngasekhohlo asebenza kwityala lakho levisa ukuze unciphise igqwetha eligxile kuhlobo lwakho lwevisa. Unokukhangela igqwetha elithile ngegama kwibar yokukhangela. Asenzi nakuphi na ukumelwa okanye isiqinisekiso malunga noqeqesho okanye ubuchule babo nabanikezeli. Ekugqibeleni unoxanduva lokuvavanya amabakala emfundo kunye nokukhetha uMboneleli wakho othile. Ngokuqhubeka nokusebenzisa iinkonzo zethu, uyavuma ukuba ungabelani nabanye ngolwazi lwegqwetha.
Kuba umfaki sicelo akenzanga sicelo sevisa, uya kuthatha uvavanyo lokuLungela iVisa. NCEDA UTHEMBEKE NGEMPENDULO YAKHO. Akukho buqhetseba ngenkqubo ye-visa yase-US, kuphela uyangenelwa kolu vavanyo. Olu vavanyo luyilelwe ukukubonisa amathuba okufumana le visa ngokuphendula imibuzo embalwa malunga nomenzi-sicelo (Lowo wenza isicelo sevisa). Iyacwangciswa ngokusebenzisa idatha yexesha lokwenyani lobudlelwane bezopolitiko, ezoqoqosho kunye nezokhuseleko phakathi kwelizwe lomenzi wesicelo kunye ne-United States. Olu vavanyo aludingelwanga ukuba luchaneke ngokupheleleyo; Injongo yaso kukukunika ukulingana kokufumana i-visa. Olu vavanyo lunokuthathwa KANYE. Ukuba unomdla wokuthatha uvavanyo lwe-visa eyahlukileyo, unokwenza iakhawunti entsha. Ungabuyela umva kwaye ujonge iziphumo zakho phantsi kwe "Akhawunti yam" ukhetho olungentla. Nceda uqaphele, uVavanyo loVavanyo loVavanyo LWEENKCUKACHA ZOLWAZI KUPHELA, nangayiphi na indlela akufuneki usebenzise iziphumo njengezinto zokugqibela zokufaka isicelo njengoko ityala ngalinye le-visa liphathwa ngokukodwa kwi-embassy esekwe kulungelelwaniso lwayo.
Apha uya kufumana uluhlu lwazo zonke izikhokelo ze-visa ezikhethekileyo kwilizwe lakho. Khangela ilizwe lakho kwindawo ehlayo, emva koko ukhethe isikhokelo se-visa onqwenela ukusijonga. Ungabuyela kweli phepha ngokunqakraza "Uhambo lwam lweVisa" apha ngasentla, emva koko ukhethe "Indlela yokufaka isicelo".
Apha uya kufumana uluhlu lwamaqabane eqela lesithathu elichongiweyo onokulisebenzisa ukufaka isicelo sakho sevisa. Onke amaqabane ahlolwe ngokwemigangatho yoMncedisi weVisa. Unokucofa iqabane kweli phepha ukuze libhekise kwiwebhusayithi yabo. Uyavuma ukuthembela kwakho kubo nabanikezeli okanye ulwazi olunikezwe ziinkonzo lusemngciphekweni wakho kwaye uthatha uxanduva olupheleleyo lwabo bonke ubungozi obunxulumene noko.